ပစ္စည်းအမျိုးအစားများ အတွင်းနားအစားထိုး ကိရိယာ
အတွင်းနားအစားထိုးကိရိယာ ကိုဆိုးဝါးသောအဆင့် နှင့်လွန်ဆိုးဝါးသော အကြားအာရုံကြော လျော့နည်းသူများအတွက် ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ ဤကဲ့သို့ခံစားနေသူများသည်နားကြားကိရိယာ တပ်ဆင်ခြင်းဖြင့်အကျိုးလုံးဝ (သို့မဟုတ်)အနည်းငယ်သာရှိသောသူများ ဖြစ်ရမည်။ အတွင်းနားအစားထိုး ကိရိယာသည်အလုပ်မလုပ်နိုင်သော နားခရုပတ်အတွင်း ထည့်ပြီး လျှပ်စစ်လှိုင်းများကိုအကြားအာရုံကြောသို့ တိုက်ရိုက်လှုံ့ဆော်ပေးသည်။ ဤကဲ့သို့လုပ်ဆောင်သဖြင့် စကားပြောတတ်ပြီး အသက်အရွယ်မရွေး ၊ စကားမပြောတတ်သေးသော အသက်အရွယ်မရွေး တပ်ဆင်နိုင်သည်။
အတွင်းနားအစားထိုးကိရိယာ တွင်အပြင်စက်နှင့်အတွင်းစက်ဆိုပြီး နှစ်ပိုင်းပါရှိသည်။
အတွင်းပိုင်းစက်တွင်လျှပ်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အစိတ်အပိုင်းများနှင့်အချက်အလက်လက်ခံရန် အင်တန်နာနှင့်တကွ နားနောက်တွင်ထားရှိနိုင်သော သံလိုက်တို့ပါဝင်သည်။
အသံဖမ်းစက်တွင်အဓိက မိန်းယူနစ်ဘက်ထရီအိမ်နှင့် အရေပြားပေါ်မှတဆင့်သတင်းပို့ပေးမည့်ကွိုင်တို့ပါဝင်းပြီး နားအနောက်တွင် တပ်ဆင်ရသည်။
အတွင်းနားအစားထိုး ကိရိယာ အလုပ်လုပ်ပ
အတွင်းနားအစားထိုးကိရိယာမှ နေ့စဉ်ကြားနေရသော အသံအမျိုးမျိုး ကို လျှပ်စစ်အချက်အလက်များအဖြစ် ပြောင်းလဲပြီး အကြားအာရုံကြောဆီသို့ ပို့လွှတ်ပေးသည်။ထိုမှသာ ဦးနှောက်က ၄င်းအချက်အလက်များကို အသံအဖြစ်ကြားရသည်။အဖြစ်အပျက်မှာ လျှင်မြန်လွန်း၍ အသံထွက်တာနှင့်အမျှ ကြားရသည်။
အသံဖမ်းစက် မိုက်ခရိုဖုန်းမှ အသံများကို ဖမ်းယူသည်။
အသံဖမ်းစက်အတွင်းမှ အသံများကို အချက်အလက်အဖြစ် သီးခြားပြောင်းယူသည်။
၄င်းအချက်အလက်များကို အသံဖမ်းစက်ကွိုင်မှတဆင့် အရေပြားကို ဖြတ် ၍ အတွင်းစက်အတွင်း သို့ ပို့ဆောင်သည်။
၄င်းအချက်အလက်များကို အတွင်းစက်မှတဆင့် နားခရုပတ်အတွင်း ထည့်ထားသော အီလက်ထရုတ်များ သို့ ပို့ဆောင်ပေးသည်။
အကြားအာရုံကြောမှ ထိုအချက်အလက်များသည် သယ်ဆောင်ပြီး ဦးနှောက်သို့ ပို့ဆောင်ပေးပြီး ဦးနှောက်မှ အသံအဖြစ်ကြားရသည်။
အတွင်းနားအစားထိုး ကိရိယာ တပ်ဆင်ခြင်း အကျိုးကျေးဇူးများ
အတွင်းနားအစားထိုး ကိရိယာ တပ်ဆင်ခြင်းဖြင့် စကားပြောဆိုသံများ ၊ ပါတ်ဝန်းကျင်အသံများ နှင့် သီချင်းများကို ကြားနိုင်သည်။ လေ့လာတွေ့ရှိချက်များ အရ အတွင်းနားအစားထိုး ကိရိယာ တပ်ဆင်ခြင်းဖြင့် စကားပြောဆိုမှု့ကို အများစု ကောင်းမွန်စွာ ကြားနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ စကားပြောဆိုမှု့ နားလည်မှု့စွမ်းရည်ကို နှုတ်ခမ်းမဖတ်ပဲ မည်မျှ နားလည်သနည်းဟု သိပ္ပံနည်းကျ အခန်းတစ်ခုအတွင်း စမ်းသပ်နိုင်သည်။ နားလုံးဝ မကြားရသော လူတစ်ယောက်အဖို့ နေ့စဉ်ကြားနေရသော တံခါးခေါက်သံ၊ ယာဉ်ရထားသံ ၊ အရေးပေါ်အသံများ ပြန်ကြားတာရတာနဲ့ပင် အများကြီး အပြောင်းအလဲ ဖြစ်စေသည်။
. အတွင်းနားအစားထိုး ကိရိယာ တပ်ဆင်သင့်သောသူများ. အောက်ပါအချက်များပေါ်မူတည်၍ တပ်သင့် မတပ်သင့် ချင့်ချိန်နိုင်သည်။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု့အတွက် အသက်ငယ်ရွယ်စဉ် အစားထိုးနားကြားကိရိယာ တပ်ဆင်ခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
စကားပြောတတ်ပြီးသော ကလေးကြီးအရွယ် နှင့် လူကြီးများတွင်လည်း တပ်ဆင်ရန် သင့်တော်သည်။
ကာလကြာရှည်စွာ နားမကြားသူများအတွက် အစားထိုးနားကြားကိရိယာ တပ်ဆင်ခြင်းကြောင့် အကျိုးအနည်းငယ်သာ ရရှိနိုင်သည်။
အလွန်ဆိုးဝါးသောအဆင့်ဖြင့် နှစ်ဖက်လုံး အကြားအာရုံချို့တဲ့နေသော ကလေးများ
အလွန်ဆိုးဝါးသောအဆင့်ဖြင့် နှစ်ဖက်လုံး အကြားအာရုံချို့တဲ့နေသော လူကြီးများ
အသက်တစ်နှစ်အောက်အရွယ် အကြားချို့တဲ့သော ကလေးများ
ခွဲစိတ်ဖို့ စိတ်အားထက်သန်ပြီး ဖြစ်နိုင်တဲ့ ရလာဒ်ကို သိရှိမျှော်လင့်သောသ
ပြန်လည်သန်စွမ်းရေး နှင့် ပုံမှန်လာရောက်ပြသနိုင်သောသ
ပုံမှန် နှင့် လျှပ်စစ်အသံ နှစ်မျိုးပေါင်းစပ်သော နည်းပညာ
ပုံမှန် နှင့် လျှပ်စစ်အသံ နှစ်မျိုးပေါင်းစပ်ခြင်းဆိုသည်မှာ
ဤနည်းပညာကို အနိမ့်သံများကြားနိုင်ပြီး အမြင့်သံများ လုံးဝမကြားနိုင်သော သူများအတွက ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ထိုသူများအတွက် သာမန်နားကြားကိရိယာ က သီချင်းသံ စကားပြောဆိုသံကဲ့သို့ ရှုပ်ထွေးသော အသံများကို ကြားရအောင် မကူညီနိုင်ပါ။ပုံမှန်အစားထိုး နားကြားကိရိယာကလည်း အနိမ့်သံကို လျှပ်စစ်သံ ပြောင်းလိုက်သည့်အတွက် အဆင်သိပ်မပြေနိုင်ပါ။ပုံမှန် နှင့် လျှပ်စစ်အသံနှစ်မျိုး ပေါင်းစပ်နည်းပညာက အနိမ့်သံများကို ပိုကျယ်စေပြီး အမြင့်သံကို လျှပ်စစ်အသံပြောင်းပြီး ကြားစေရသည့်အတွက် နားတစ်ဖက်တည်းမှာပင် တပြိုင်နက် အသံများကို ပုံမှန်ကြားနိုင်သည
ပုံမှန် နှင့် လျှပ်စစ်အသံနှစ်မျိုး ပေါင်းစပ်နည်းပညာတွင် အတွင်းစက်နှင့် အပြင်စက်ဆိုပြီး နှစ်ပိုင်းပါဝင်သည်။
အသံဖမ်းစက်တွင်အနိမ့်သံများကို မြှင့်ပေးသောယူနစ်မှ ဖမ်းယူပြီး အမြင့်သံများကိုအလိုလျှောက်လျှပ်စစ်အချက်အလက်အဖြစ်ပေါင်းပြီး အကောင်းဆုံးအသံများကို အမြင့်သံမကြားရသူကိုကြားစေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
. ဤကိရိယာတွင် နည်းပညာနှစ်မျိုးပေါင်းစပ်ထားပြီး တစ်ခုချင်းစီက သက်ဆိုင်ရာ အသံကို ဖမ်းယူပေးသည်။အတွင်းနားအစားထိုးကိရိယာက ပါတ်ဝန်းကျင်ရှိအသံများကို လျှပ်စစ်အချက်အလက်အဖြစ် အကြားအာရုံကြောမှတဆင့် ဦးနှောက်သို့ ပို့ဆောင်ပြီး အသံအဖြစ်ကြားရသည်။
အမြင့်သံများကို အပြင်စက်၏ မိုက်ခရိုဖုန်းမှ ဖမ်းယူပြီး အချက်အလက်အဖြစ်ပြောင်းလဲသည်။
ဤအချက်အလက်များကို ကွိုင်မှတဆင့် အရေပြားကိုဖြတ်ပြီး အတွင်းစက်သို့ ပို့ဆောင်ပေးသည်။
ဤအချက်အလက်များကို အတွင်းစက်မှ လျှပ်စစ်အချက်အလက် အဖြစ် ပြောင်းပြီး နားခရုပတ်အတွင်းရှိ အီလက်ထရုတ်များသို့ ပို့ပေးသည်။
ရောက်ရှိလာသော အချက်အလက်များကို အကြားအာရုံကြောမှတဆင့် ဦးနှောက်သို့ ပို့ဆောင်ပေးသည်။
နောက်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှ ပုံမှန်ကြားနေသော အနိမ့်သံများကို ပိုမိုကျယ်ပေးပြီး နားခရုပတ်သို့ လှုံ့ဆော်ပေးသည်။
အနိမ့်သံများကို အပြင်စက်၏ မိုက်ခရိုဖုန်းမှဖမ်းယူပြီး သီးခြား အချက်အလက်အဖြစ် ခွဲထုတ်ပေးသည်။
ထိုအချက်အလက်ကို နားတွင်တပ်ဆင်ထားသော အသံချဲ့ကိရိယာမှ တဆင့် ပိုမိုချဲ့ပေးပြီး နားထဲသို့ ပို့ဆောင်ပေးသည်။
ထိုအသံက နားခရုပတ်အတွင်း ပုံမှန်ရှိသေးသော အပိုင်းကို လှုံ့ဆော်ပေးသည်။
ထိုလှုံ့ဆော်မှု့ကို အကြားအာရုံကြောက တဆင့် ဦးနှောက်သို့ ပို့ဆောင်ပေးသည်။
အလယ်နားအစားထိုးကိရိယာ ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
နားကြားကိရိယာ / နားကြပ် မတပ်ချင်တော့သော အကြားအာရုံ လျော့နည်းသူများအတွက် ရည်ရွယ်သည်။နားကြားကိရိယာ နဲ့ ကွဲပြားချက်မှာ အသံလှိုင်းကို တုန်ခါမှု့လှိုင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်သော ကြောင့် အသံပို၍ ကျယ်ကျယ်ကြားရသည်။ အလယ်နားအစားထိုး ကိရိယာသည် အလယ်နားအတွင်းပိုင်းနေရာ ချိတ်ဆက်ထားပြီး ပြင်ပမှ အသံများကို တုန်ခါမှု့လှိုင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီး တိုက်ရိုက်ပို့ဆောင်ပေးသည်။ ဤတုန်ခါမှု့လှိုင်းများကို နားမကြားသောအသံများအပေါ် မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲနိုင်သည်။လက်ရှိဈေးကွက်အတွင်း အအောင်မြင်ဆုံး အလယ်နား အစားထိုးကိရိယာမှာ ( Vibrant Soundbridge )ဖြစ်သည်။ ၄င်းစက်ကိရိယာတွင် အပြင်စက် နှင့် အတွင်းစက်ဆိုပြီး နှစ်ပိုင်းပါဝင်သည်။
အတွင်းစက်တွင် တုန်ခါပေးသော အရိုးတုစက် (VORP) ၊ အတွင်းပိုင်းကွိုင် သံလိုက် နှင့် (FMT) စက်တို့ပါဝင်သည်။
အပြင်စက်တွင် အသံဖမ်း မိုက်ခရိုဖုန်း ၊ ဘက်ထရီ အသံကို အချက်အလက်အဖြစ် ပြောင်းလဲစေသောယူနစ် နှင့် သံလိုက်တို့ပါဝင်ပြီး ဦးခေါင်းပေါ် ဆံပင်အောက် ထဲ၌ တပ်ဆင်ထားရသည်။
အပြင်စက်မှ အချက်အလက်များကို အတွင်းစက်မှတဆင့် (FMT) ကို ပို့ဆောင်ပေးပြီး (FMT) မှ တပ်ဆင်သူအတွက်လိုအပ်သော အသံလှိုင်း အတိုင်း တုန်ခါပေးသည်။
အလယ်နားအတွင်းရှိ အရိုးတစ်ခုကို ချိတ်ဆက်ပြီး တပ်ဆင်ရသော ခွဲစိတ်အစားထိုး စက်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ပုံမှန်နားကြားကိရိယာနှင့် အဆင်မပြေသော အကြားအာရုံချို့တဲ့သူများအတွက် အသုံးပြုသည်။ အလယ်နားခွဲစိတ်ပြုပြင်၍ မရသောလူနာများအတွက် အလယ်နားတွင်း ပုံစံများပေါ်မူတည်၍ (FMT) ကို တွဲချိတ်ရသော နည်းပညာဖြစ်သည်။s
အလယ်နားရှိIncus ဟု ခေါ်ဆိုသော အရိုးလေးတစ်ခုကို (FMT) နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ပုံမှန်အသံအတိုင်း အသံလှိုင်းများ တုန်ခါစေခြင်းဖြင့် ဦးနှောက်က အသံကြားစေခြင်းကို Incus Vibroplasty ဟု ခေါ်သည်။
အပြင်စက်မှ အသံအချက်အလက်များသည် အတွင်းစက်ကွိုင်များမှတဆင့် (FMT) သို့ ရောက်ရှိသည်။
Incus အရိုးလေးသို့ ချိတ်ဆက်ထားသော (FMT) သည် အပြင်မှ အသံများကို ပုံမှန်အရိုးလေးများ တုန်ခါမှု့အတိုင်း အသံလှိုင်းများ တုန်ခါပေးပြီး ဦးနှောက်သို့ပို့ဆောင်ပေးသည်။
အသံလှိုင်းများကို အရိုးမှတဆင့် ပို့ဆောင်ခြင်း (BCI)
အသံလှိုင်းများကို အရိုးမှတဆင့် ပို့ဆောင်သည့် ကိရိယာ (BCI)
အပြင်နားနှင့် အလယ်နားမကောင်းသော နားတစ်ဖက်တည်းလေးခြင်း နှင့် အခြားသော ( conductive deafner ) အမျိုးအစားလူနာများအတွက် သင့်တော်သည်။
The Bonebridge ကိရိယာသည် ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး အရိုးမှတဆင့် အသံလှိုင်းများပို့ဆောင်ပေးသော ကိရိယာဖြစ်ပြီး အတွင်းစက်ကို အရေပြားအောက်တွင် ထည့်သွင်းထားသည်။အပြင်အသံဖမ်းစက်မှတဆင့် တိုအတွင်းစက်သို့ အသံများပို့ဆောင်ပေးသည်။
အတွင်းစက်ကို အရေပြားအောက်တွင် ထည့်မြှုပ်ထားပြီး နေရာမရွေ့အောင် ထိန်းထားသော သံလိုက်ပါဝင်သည်။
အသံလှိုင်းများ အရိုးမှတဆင့် ပို့ဆောင်ပေးသော ကိရိယာအလုပ်လုပ်ပ
ဤကိရိယာ ကို အသံများ အလယ်နားမှ မဖြတ်သန်းနိုင်တော့သော လူနာများတွင် အသုံးပြုသည်။အသံလှိုင်းများကို ဦးခေါင်းခွံ တုန်ခါခြင်းဖြင့် ပုံမှန်အသံတိုင်း အတွင်းနားသို့ ပို့ဆောင်ပေးသည်။
အပြင်ဘက် ဆံပင်အောက်၌ သံလိုက်ဖြင့်ကပ်ထားသော စက်မှ အသံများ ဖမ်းယူပြီး အတွင်းစက်သို့ ပို့ပေးသည်။
.အတွင်းစက်ကို ဦးခေါင်းခွံတွင် မြှုပ်ထားပြီး ရောက်ရှိလောသော အသံများကို အသံလှိုင်းအဖြစ်တုန်ခါပေးပြီး ကပ်လျှက် အရိုးများဆီသို့ ပို့ဆောင်ပေးသည်။
ထိုအသံလှိုင်းများသည် နောက်ပိုင်းတွင် အတွင်းနားသို့ ရောက်ရှိပြီး အသံအဖြစ်ဖမ်းယူကာ ပုံမှန်အသံအတိုင်းကြားရသည်။